Ungabunciphisa kanjani ubukhulu bohlelo ku-macOS | Ngivela kwa-mac
Ungabunciphisa kanjani ubukhulu bohlelo kuma-macOS
U-Ignacio Sala | | I-Mac OS X, Izifundiswa
Isikhala sokugcina ku-hard drive noma umakhalekhukhwini wethu siyimpahla eyigugu esikhathazeka ngayo kuphela lapho sibona imishini iqala ukusebenza ngokungahambi kahle noma lapho isazisa ukuthi siphelelwa yindawo yokugcina. Ngenkathi sikwi-iPhone noma i-Android, sisheshe sibe nesixazululo ngokususa izinhlelo zokusebenza, kuma-macOS hhayi.
I-Apple yethule umsebenzi omusha kuma-macOS ngaphakathi kwethebhu yesitoreji esivumela phatha futhi uthintane ukuthi i-hard drive yethu isetshenziswa kanjani ngaso sonke isikhathi, umsebenzi olungile, kepha ongenayo imisebenzi, ikakhulukazi uma sikhuluma ngendawo esikuyo uhlelo lwethu, inkinga esibhekana nayo futhi siyixazulule kule ndatshana.
Izinhlelo zokusebenza kwamakhompiyutha zithatha kakhulu futhi akuvamile ngendawo ekuyo ku-Mac yethu, uma kwenzeka isivimba, ithatha phakathi kuka-20 no-40 GB. Mina, njengoba ubona esithombeni esihola le ndatshana, uhlelo luthathe i-140 GB, usayizi ongenakulinganiswa noma ngabe ubukeka kuphi.
Ukuzama ukuthola ukuthi kwenzakalani, ngazama (yize bengivele ngikwazi umphumela) umsebenzi we-macOS esivumela ukuthi sibone ukuthi imishini yethu isetshenziselwani. Umphumela: Ngahlala nginje. Lo msebenzi ayinikezi imininingwane eningiliziwe ngosayizi wohleloEndabeni yami ngingu-140 GB, ngakho-ke ngiye ngasebenza ukuze ngithole isisombululo, isixazululo ngendlela i-Apple engasinikezi ngayo ngokusebenzisa insizakalo yezobuchwepheshe noma ngekhasi lokusekelwa.
2 Idiski Yokusungula X
3 Futhi manje lokho?
Ngemuva kwezicelo eziningi, ngathola isixazululo: DaisyDisk. Ngenxa yalolu hlelo lokusebenza, ngikwazile ukuqinisekisa ukuthi kwenzakalani ngesikhala esithathiwe seMac yami. Njengoba ubona esithombeni esingenhla, ngemuva kokuthwebula i-hard drive okukhulunywa ngayo, uhlelo lokusebenza lunginikeze imiphumela efanayo nomsebenzi wendabuko iMac, kepha ngenye indlela, ukusabalalisa isikhala ngokuhlukile.
IDaisyDisk isibonisa ngokuzimela isikhala esakhiwe ngabasebenzisi abahlukene esibadalile kukhompyutha yethu, kanye nezinhlelo zokusebenza, uhlelo ... Ayisikhombisi nje kuphela ukuthi isigaba ngasinye sinani, kepha futhi iyasivumela khomba ukuthi iziphi izinhlelo ezizisebenzisayo nezinkomba lapho zikhona.
Mina, inkinga ibikubasebenzisi, nge-287 GB yesikhala. Ngokuthola Abasebenzisi> Nacho (igama lami lomsebenzisi)> Umtapo Wezincwadi> Ukusekelwa Kohlelo Lokusebenza, ungabheka ukuthi i-63 GB yayihlala kanjani nge-iMazing, uhlelo lokusebenza obulususe ngaphezu konyaka odlule nokuthi wayengasayisebenzisanga futhi.
Olunye uhlelo lokusebenza oluthathe usayizi omkhulu kwikhompyutha yami yi-Steam ene-36 GB, lapho ngifakwe imidlalo emibili neLitecoin eno-16 GB, isicelo obekufanele ngisihlole ngezinkinga zomsebenzi nokuthi Bengikufake kuphela kwikhompyutha yami isonto lonke. Lezi zicelo ezintathu zithathe isamba esingu-115 GB.
Inkinga akuseyona indawo abahlala kuyo, kepha kunalokho IMacOS ayikwazi ukukhomba leso sikhala futhi isifaka ngaphakathi kohlelo, ngaphandle kokusinikeza ithuba lokukwazi ukukuqeda ngesandla ngaphandle kokusebenzisa izinhlelo zangaphandle.
Ngenxa yeDaisyDisk, angikwazanga kuphela ukwazi iqiniso, kepha futhi kuyangivumela finyelela ngqo kufolda lapho lawo mafayili atholakala khona bese uwathumela kudoti ngqo, umsebenzi okufanele usinikeze wona i-macOS, ikakhulukazi lapho isikhala sama-SSD esiwasebenzisayo kumakhompyutha aso asishibhile impela ukusho.
IDaisyDisk, ngaphezu kokukhombisa imininingwane yangempela mayelana nokuthi i-hard disk yethu imatasa kangakanani, nayo isinikeza ihluzo, esivumela ukuthi sithole masinyane umbono wesikhala izinhlelo zokusebenza ezikuso kufolda ngayinye esifinyelela kuyo. Uma uthanda imidwebo, uzoyithokozela, kepha ayisebenzi, ngaphandle kokubonakalayo.
Okuhle kunakho konke, lolu hlelo lokusebenza lushibhile kakhulu kulokho olwenzayo empeleni. IDaisyDisk ibiza ngentengo ema-euro angama-10,99, inani elingaphezulu kokulungiswa lomsebenzi omuhle eliwunikezayo. Uhlelo lokusebenza luyatholakala ku-Mac App Store nasekhasini lonjiniyela elisemthethweni ngentengo efanayo. Okuwukuphela kodwa, yilokho ekhasini lakhe lewebhu Uhlobo lwakamuva lohlelo lokusebenza luhlala lutholakala ngaphambi kokuqaliswa kwalo kwi-Mac App Store.
Kusuka kuwebhusayithi yeDaisyDisk, singakwazi landa inguqulo yesilingo, inguqulo ongazihlola ngayo ukuthi isivumela kanjani ukuthi sikhulule leso sikhala sesistimu esingakwazi ukusibona nganoma iyiphi enye indlela, ngaphandle kokuthi sizinikele ngokukhethekile ekuhlaziyeni, enkombeni ngomkhombandlela, ubukhulu bazo zonke izinhlelo zokusebenza esinazo noma sikufakile yini okokusebenza kwethu, umsebenzi ongasithatha amahora amaningi.
Idiski Yokusungula X
Olunye uhlelo lokusebenza esinalo ukuze sikwazi ukususa isikhala uhlelo olukulo kukhompyutha yethu iDisk Inventory X, a uhlelo lokusebenza lwamahhala oluhlaziya isitoreji sethu ukudiliza isikhala esikuhlu lwemikhombandlela ngayinye esinayo enguqulweni yethu ye-macOS.
Umehluko omkhulu phakathi kwazo zombili izinhlelo zokusebenza yi-aesthetics, i-interface yomsebenzisi. Ngenkathi iDaisyDisk isinikeza isikhombimsebenzisi esilula kakhulu ukusisebenzisa, I-Disk Inventory X ine-interface eyinkimbinkimbi, okungathandeki kakhulu futhi ezikhathini ezingaphezu kwesisodwa, sigcine ngokuvala isicelo esikhundleni sokubuyela esinyathelweni esedlule.
Mayelana nokusebenza kwayo, IDiski Yokusungula X isebenza ngendlela efanayo neDaisyDisk, ngokuzimela isibonisa isikhala esinezinkomba ezikwi-hard drive yethu, izinkomba esingazifinyelela kusuka kuhlelo lokusebenza uqobo ukuze siqhubeke nokuzisusa futhi ngaleyo ndlela sikhulule isikhala esikuhlelo lwethu. Ngokungafani neDaisyDisk, Idiski Yokusungula X iyatholakala ukuze ilandwe ngqo kusuka kuwebhusayithi yonjiniyela futhi imahhala ngokuphelele.
Futhi manje lokho?
Lapho sesiqhubekile nokususa isikhala sezinhlelo zokusebenza ezazibalwa njengesikhala sohlelo, kufanele siphinde sikwazi ukufinyelela kuzo Mayelana nale Mac> Isitoreji> Phatha Ukuze i-macOS ibalwe kabusha isikhala esiphelele sohlelo, uma sesisuse idatha ebiyingxenye yayo ngephutha.
Ukugwema leso sikhathi, isistimu yethu iba yi-sinkhole ye-GB, okungcono kakhulu esingakwenza ukubhalisa ku-ajenda chitha njalo ngenyanga, noma yiziphi zalezi zicelo ezimbili, ukuze kubhekwe ukuthi ngabe uhlelo lwethu lukhule ngokweqile futhi noma luyaqhubeka nokusebenza ngokujwayelekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungabunciphisa kanjani ubukhulu bohlelo kuma-macOS
IGrandPerspective iyindlela elula yokusebenzisa enye mahhala. Kubonakala kimi ukuthi usezingeni eliphakeme likaDaisy
Okuthunyelwe okuhle kakhulu! Bengine-90 GB yomsindo ebengiyisebenzisela ama-laburos, ebengingayidingi futhi bengingazi nokuthi balapho! Ngikwenze konke ngeDiski Yokusungula ukuthi yize "kubi" kakhulu, kuyifeza ngokuphelele inhloso.
UJOSE DAVID kusho
IPOSI EBALULEKILE, NGABE NOHLELO LWAMI NGAPHEZU KWAMA-300GB BUSY.
Phendula kuJOSE DAVID
Kuhle kakhulu bengifuna le ndatshana onyakeni ongu-1 owedlule, nginemidlalo yesipoki engingakwazi ukuyisusa engihlala kuyo i-50gb ngithemba ukuthi idiski le-daisy liyayifeza, imikhonzo emihle kakhulu
Kwangathi iMacBook entsha, i-HomePod inganciphisa intengo nokunye okuningi. Okuhamba phambili kweviki ngivela kwa-Mac
IMac Pro ne mini kusuka ngo-2018 kuyatholakala esigabeni esilungisiwe